Kuchengetedza uye chengetedzo matipi | MyWeedSeeds.com
kuchengetedzwa uye chengetedzo matipi
Safety uye Security mazano
Guerrilla kurima mbanje
Kana tichitaura nezvekurima kwemagandanga, vanhu vazhinji vari kutaura nezvekurima chimwe chinhu pane chako chisiri chako kana kuti "kumashure makumi mana" epfuma yako uko vekunze vasina chavanoona. Unogona kuwana nzvimbo dzisingawanikwe nyore kana dzinowanikwa nevanhu asi dzisingashandisi ...
Tora matanho kana iwe uri kuenda
Kusvuta mbanje kubva kunzvimbo yako wega yekugara ndiyo nzira iri nani pane kuputa mbanje mumotokari yakavhurika uko vanhu vanogona kukuona nyore nyore uye kutsvaga nekutora kunogona kukubata iwe. Girovhosi bhokisi mukati memotokari yako inzvimbo yakaipa yekuchengetera mbanje yako. Mupurisa wese anozobvunza ...
Kurova weti yemushonga bvunzo
Maitiro ekuita nemapurisa
Kana zvisiri pamutemo kuva kana kusvuta mbanje kwaunogara, usaitakure paunenge wabva pamba pako! Sevha kusvuta kweimba yako kana imba yeshamwari. Kuvanza kwakanaka kana uchifanira kuenda kumutengesi wemuno kuve negomo kana kumhanya bhasikoro uye kupfeka zvipfeko zvinoita kunge ...
Indoor uye yekunze matanho ekuchengetedza
Kwese kutenderera pasirese, mapurisa anoshandisa asingaverengeke-anobhadhara mutero madhora kuyedza kutsvaga nekumisa varimi vembanje. Zvino mubvunzo wave wekuti varimi vecannabis vangadzivisa sei kurasikirwa nemiti yavo yembanje kumapurisa uye vakatarisana nenguva yejeri. Heano matipi mashoma ayo angaite kuti zvive nyore. Chengetedza oparesheni yako hush-hush ...
Kuchengetedza uye Kuvanzika kune varimi vembanje
Mazhinji makambani ekushandisa anokwanisa kutaura kana bhiri rako rakakwira kubva kwaraive gore rapfuura, uye iyi ndiyo imwe nzira iyo mapurisa ari kutanga kubata varimi vembanje. Kazhinji, mamwe ma500 watts emhuri yemhuri anozotorwa seyakawedzera magetsi emwedzi uye kana ukabvunzwa, unogona kungo ...
Kunze kwekuchengetedza varimi vembanje
Vazhinji vanhu vanogona kutarisa kwakatenderedza muyadhi wekurima mbanje uye vasina kana kucherechedza mbanje dzichikura kumashure nekuda kwekuti zvirimwa izvi zvinowirirana zvakadii. cherechedzwa kana ...
Isu takanzwa vanhu vachiti avo vanokanda nematombo vanonhuwirira sora, kana paine zvishoma kana pasina hwema, nekuda kwekufungidzirwa kwekushandisa zvinodhaka, asi mune zvese chokwadi, hwema hunodzikira mukati memaminetsi kubva pavhudzi nembatya. Chikamu chimwe chemuviri wako chichava nekunhuhwirira kwenguva refu maoko ako ...